सविन र अनुको बिहे चर्चा, के हो वास्तविकता ? « Ramailo छ
सविन र अनुको बिहे चर्चा, के हो वास्तविकता ?
प्रेमिका अनु शाहसँग बिहे भएको खबरलाई नायक सविन श्रेष्ठले अस्विकार गरेका छन् । अनुसँग सविनको कानुनी बिवाह भएको भनी मिडियामा आएको खबरलाई सविनले सरासर गलत भने । सत्य के हो त ?
‘हो हामी केही हप्ता अगाडी काठमाण्डू जिल्ला अदालत गएका थियौं, तर बिहे गर्नको लागि चाहि होइन्’, सविनले खुलाए, ‘म र अनुलाई एक व्यक्तिले गाली गलौज र धम्की दिएकाले हामी कानुनी सहायता लिन जिल्ला अदालत गएका थियौं । बिहे गर्न गएको भन्ने कुरा चाहिं झुठो हो ।’ तेश्रो व्यक्तिलाई असर पर्ने भन्दै अनु र आफुलाई गाली गर्ने व्यक्तिको नाम उनले खुलाउन चाहेनन् ।
अब बिहे चाहिं कहिले गर्ने त ? ‘करिअर भन्दा बिहे ठुलो कुरा होइन, समय छ बिहे गरौंला’, सविनले भने । तर सविन र अनुले बिहे गरेका भन्ने चर्चा लामै समयदेखि फिल्मी वृत्तमा चलिरहेको थियो । सविन र अनुले झुठ बोले या सत्य लुकाउन खोजे त्यो चाहिं उनीहरु आफैं जानुन् ।